FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BULLMASADOR - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bullmasador
Alika mifangaro mifangaro Bullmastiff / Labrador Retriever
Cody ilay brindle volontany Bullmasador (Bullmastiff / Labrador Retriever Hybrid Dog) amin'ny 3 taona— 'Ny reniny dia brindle Bullmastiff ary ny rainy dia a sokola Lab . '
Ny alika Bullmasador dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Bullmastiff ary ny Labrador retriever . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra eo amin'ny hazofijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ireo karazana ao amin'ny hybrid ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Bullmassador
Designer Dogs Kennel Club = Bullmassador
Mpanoratra International Canine Registry®= Bullmasador
Cody the brown brindle Bullmasador (Bullmastiff / Labrador Retriever mix dog) amin'ny 3 taona
Bruiser the Bullmasador (Lab mainty / mifangaro Bullmastiff) amin'ny 6 herinandro - 'Baolina matanjaka be izy ary hitako tokoa ny toetran'ny Lab mivoaka ao aminy — tiany ny mijery vorona ary manenjika bibikely! Nanomboka somary nikiakiaka ny hodiny saingy nihanaka lalina tato ho ato. Fantatro fa hiaro be antsika izy satria rehefa tsy ao anaty vata dia mivoaka eo am-baravaran'ny vavahady fidirana izy. Izy no zanakay lahy lahy. '
Bruiser the Bullmasador (Lab mainty / Bullmastiff mix) alika kely amin'ny 4 volana
'Ity i Bruiser amin'ny 2 taona. Alika be fitiavana izy ary mankafy milalao fakana ny Kong-ny. Ny zavatra tena tiany atao dia ny misolelaka eo am-pofoananao — omeny ny lanjany 82 kilao! Manana toetra lehibe izy ary te hilalao tsy tapaka. Izy dia miaro fatratra ny tranonay - tena hampahafantatra anao izy rehefa misy olona manantona. Tsy azoko an-tsaina ny alika mamy sy falifaly kokoa ary efa nianatra ny tsy hijery ilay fandevenana mihitsy aza izahay. Ny hubby dia mijery an'i Cesar ara-pinoana - mieritreritra izy fa ny 'CHHHH' dia tsara amin'ny fampitsaharana ny alika amin'ny zavatra tsy tokony hataon'izy ireo. '
Stella ilay alika kely Bullmasador mainty tamin'ny 9 herinandro (alika hybrid Bullmastiff / Labrador Retriever)
Stella ilay alika kely Bullmasador mainty tamin'ny 13 herinandro (alika hybrid Bullmastiff / Labrador Retriever)
bulldog frantsay mainty sy fotsy
tibetan terrier mainty sy fotsy
mifangaro bichon sy cavalier king charles